တောင်ပေါ်ချင်းပြောင်းဖူးပြုပ် ~ စန္ဒကူး
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က ချင်းတွေမို့ စားဖူးတယ်။
နောက် ပွဲတစ်ခုခုရှိရင် ပါတတ်တာက ၀က်အူထဲမှာ အစာသွပ်ထြားတဲ့ စားစရာ။ အဲဒါကိုတော့ ၀က်သားမစားလို့ မစားဖြစ်ဘူး။
အင်း.. ကူးလဲ ၀က်သား စားဘူး။
ဂျင်းနဲ့ငရုတ်သီးထောင်း၊သံပုရာသီးကိုစားခါနီးမှ ပြောင်းဖူးပြုပ်ထဲရောစားလိုက်တာလား ညီမ
ကူးစ်
- ဟုတ်..စားခါနီးမှ ထည့်စားတာပါ.
- ဖလမ်း လား ဖလန်း လား စာလုံးပေါင်းလွဲရင်ခွင့်လွှတ်။ Falam..?
-ရုံလေးစ် အမျိုးတော်လို့ရပီဟေ့..ဒါဆိုရင်..း))
အလုပ်မအားလို့ ဘယ်မှမရောက်တာတောင်မှ ဘလော့ဂ်ကိုဖွင့်ကြည့်ရင်း ပြောင်းဖူးပြုတ်ဆိုလို့ လာငမ်းတာလေ........း))
ဒါပေမယ့် အဲ့သလိုဟာတော့ တစ်ခါဆို..... တစ်ခါမှမစားဖူးသေးပါဘူးဗျာ........း((
ပြောင်းဖူးကိုဆီနဲ့ဆားနဲ့ ရောနယ်စားဖူးတယ်... လက်ဖက်သုတ်နဲ့ရောစားဖူးတယ်... ထမင်းနဲ့ရောကြော်စားဖူးတယ်... ကူးပြောသလိုပုံထဲကလိုမျိုးမစားဖူးဘူး... စားကြည့်ချင်တယ်
rose.. ဒီပြောင်းဖူးက ပြောင်းဖူးကို အခြောက်လှမ်း အစေ့ခြွေပီး ထောင်းထားတာပါ.
ကူးတို့စားနေကြ ကတော့အစိမ်းအနုလေးတွေကို ပြုပ်စား/ ကြော်စား... သုပ်စား.. အရသာတစ်မျိုးပေါ့။ ဒါကတော့ ပြောင်းဖူးအရင့်တွေ အခြောက်လှမ်းခြွေပီး နေလှမ်းထောင်းတာမို့ အရသာ တစ်မျိုး..း)
Corn is hard to digest and it show up in stool (poop) just like that. :D
Maung Zo Phay said...
yaa its we call (Bu Ti)if u add meat or pork its call (Sa Bu Ti)if u just add some read bean .We call (bai Bu ti)..its our Chin people fav food..thanks u Ku Ku..for Share and introduce our food..